Maitiro ekudzima Instagram account | ECommerce nhau
Parizvino tine masocial network akawanda. Ko kana Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ... Kana iwe uine agency kana uri munhu akazvimiririra, ungasakwanisa kuzviita zvese, uye iwe unofanirwa kukoshesa zvimwe uye kubvisa zvimwe. Asi sei kudzima Instagram account?
Kana iwe uchida kuidzima, ingave kwenguva pfupi, zvachose, kuchengeta iyo mifananidzo, nezvimwe. pano iwe unowana mhinduro uye madhairekitori aunoda kuzviita. Enda zvako!
1 Chii chinonzi Instagram uye nei kuchidzima
2 Bvisa Instagram account, unozviita sei?
2.1 Bvisa Instagram account kwenguva pfupi
2.2 Bvisa Instagram account zvachose
3 Maitiro ekuitazve account yako
4 Kudzima kwenguva pfupi kana zvachose kuri nani here?
Chii chinonzi Instagram uye nei kuchidzima
Instagram ndeye Facebook, yave kunzi Meta, sezvazvinoitika neWhatsApp kana nesocial network iyo yakapa kambani iyi zita rayo, Facebook.
Pakutanga yakaberekerwa kukwikwidzana nePinterest, ndiko kuti, yaiva social network yemifananidzo. Nekudaro, nekufamba kwenguva yakabatanidzwa uye yakakwanisa kukwezva vateereri vazhinji vaive vaneta neFacebook uye vakaona pa Instagram nzira iri nani yekusvika vangangove vatengi kana shamwari.
Parizvino vanogara pamwe chete (chokwadi, kuita zvinhu zvakawanda pa Instagram kunoda Facebook account) asi nei kuidzima?
Pane zvikonzero zvakawanda zvekudzima account:
Wadii kuishandisa. Kana ikaenda kwenguva refu isina kuishandisa, pakupedzisira kusangana nevanhu vaunavo seshamwari kunorasika, uye izvo zvinokonzeresa kuti, kunyangwe ukaidzosera, unogona kudhura zvakanyanya.
Nokuti unoda kuchinja maitiro. Fungidzira kuti une Instagram account yebhizinesi rako reSocial Media. Asi iwe wafunga kuti uchazvipira kune SEO. Zviri nani kubvisa tsvakiridzo yebhizinesi rako rekare uye kuvhura idzva kuitira kuti iwe ugone kutarisa kune iro basa idzva kubva pakutanga.
Nokuti wakaneta. Ma social network anonetesa. Zvakawanda. Ndicho chikonzero pane dzimwe nguva dzaungada kubvisa zvachose.
Tevere tinokupa matanho enzira dzakasiyana siyana dziripo dzekudzima Instagram account.
Bvisa Instagram account, unozviita sei?
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuziva ndechekuti zviri nyore kwazvo kunyoresa, ndiko kuti, kunyoresa pa Instagram. Asi kana zvasvika pakusiya zvinogona kuva musoro mukuru. Saka zvakanaka kufunga nezvechisarudzo chaunoda kuita.
Kana iwe uchida kudzima kwechinguva, unogona kuzviita nekudzima yako Instagram account kwenguva pfupi. Chii chinoitika kudai? Zvakanaka, hauchazoonekwa pane network, kunyangwe vakakutsvaga, asi zvese zvaunazvo muprofile yako zvichachengetedzwa. Chete, kune dzimwe nyika, iwe wakavanzwa.
Unoda kunyangarika zvachose here? Iwe unogona zvakare kuzviita, chete mune iyi kesi, iyo mafoto, makomendi, nyaya, mavhidhiyo ... anopera zvachose. Kusanganisira username.
Bvisa Instagram account kwenguva pfupi
Unoziva here kuti kudzima Instagram account unoda komputa? Chaizvoizvo, haugone kuzviita nenharembozha yako, asi unofanirwa kuve nedesktop browser (kana kugonesa imwe panharembozha yako). Izvo zvakajeka ndezvekuti kubva pachikumbiro pachacho haugone kuzviita.
Iwe unofanirwa kuisa iyi webhusaiti: 'https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary'.
Ikoko, iwe unofanirwa kutsanangura chikonzero nei uchida kudzima account yako uye iwe unofanirwa kuisa password yako kuti uone kuti ndiwe uri kunyatsoda kuzviita. Panguva iyoyo, chimiro chako chichavharwa.
Kureva kuti, hapana achaona kana kuona mafoto, makomendi ... awakatumira usati wadzima account yako.
Inogona kunge iri sarudzo yakanaka kana iwe uchingoda kutora zororo kubva pasocial network pasina kukanganiswa nemunhu.
Bvisa Instagram account zvachose
Kana iwe waita danho rekugumisa zvachose account yako pa Instagram, uye urasikirwa nezvose zviri mairi, saka iwe unofanirwa kuenda kune iyi url 'https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ '.
Mariri iwe uchadzima account yako zvachose uye zvachose. Mune mamwe mazwi, mafoto, mavhidhiyo, kana kudyidzana kwawakaita hakupo. Kwete kana zita rako rekushandisa. Zvichaita sekunge hausati wambove pa Instagram.
Paunopinda iyo peji, ichakubvunza iwe, kana wanga usati watopinda mukati, kuti upinde neako username nepassword. Kana wangozviita, zvinozokukumbira kuti uzvizivise nezvechikonzero nei uchida kudzima account yako.
Ichakubvunza password yako zvakare uye bhatani dzvuku richaonekwa. Kana ukaidzvanya, unodzima zvachose account yako uye hapazove neimwe nzira yekuidzosera. Mufunge, hazvisi zvekukurumidza sezvaungafunga. Chaizvoizvo, ichakupa nguva yemazuva mashoma. Kana panguva iyoyo iwe ukaisa account yako, kudzima kwekupedzisira kwakaoma mitezo, uye ipapo unozofanirwa kutanga matanho ese zvakare kuti uzviite.
Iinishuwarenzi kana ukachinja pfungwa dzako mazuva mashoma gare gare uye usingade kudzima basa rese rawakwanisa kuita paaccount.
Maitiro ekuitazve account yako
Panyaya yekudzimwa zvachose, hapana nzira yekumisikidza iyo account, nekuti hapana account iripo. Asi ungangoda kuiitazve kana waibvisa kwenguva pfupi.
Asi sei kuti utange kushanda zvakare? Muchiitiko ichi, nzira yekuimisa zvakare ndeyekupinda mukati, kungave pakombuta kana mune mobile application. Naizvozvi, unogona kunge uchishingaira zvakare.
Ehe, kana ukaidzima kwenguva pfupi uye mushure memaminitsi gumi, kana awa, iwe uchida kuidzosera, hazvigoneke; Izvo zvinodikanwa kupa maawa mashoma kuti maitiro aite uye akubvumire iwe kupinda muakaundi yako.
Kudzima kwenguva pfupi kana zvachose kuri nani here?
Pakadai hatikwanise kukuudza kuti pazviviri izvi ndeipi iri nani nekuti zvinoenderana nezvinangwa zvaunazvo. Kana iwe wafunga kusiya Instagram nekuti wakaneta, ingave iri zano rakanaka kumisa mushandisi pasina kurasikirwa nazvo nekuti ungangoda kudzoka chero nguva. Uye, kusiyana nemamwe masocial network, Instagram haibvisi iyo mbiri kunyangwe ikapedza mwedzi nemwedzi yakabviswa kwenguva pfupi.
Zvino, kana ukafunga kuidzima, kungave nekuti hausi kuzopinda nayo zvakare, nekuti hausi kuda kuenderera neaccount, nezvimwe. chinhu chakanakisa chingave kuridzima, pamwe nekuita kopi yekuchengetedza yeprofile yako kuti usarasikirwe nemavhidhiyo nemifananidzo) uye nekudaro kudzivirira izvo zvirimo kubva muMeta dhatabhesi.
Wakambodzima yako Instagram account? Zvaive nyore here kuzviita uye kudzoka mushure mechinguva?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Maitiro ekudzima Instagram account
Vepamusoro 5 vatengesi vezvigadzirwa zvekurongedza muSpain